Home News Maxaad ogeeyn oo saakay ka socda Degmada Bulla-burde Ee Gobolka Hiiraan
Maxaad ogeeyn oo saakay ka socda Degmada Bulla-burde Ee Gobolka Hiiraan
Ciidamada amaanka ayaa Maanta waxaa ay baaritaano ka wadaan degmada Buullo Burde ee Gobalka Hiiraan.
Ujeedka Baaritaanka ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay sidii looga hortagi lahaa kooxaha inta badan falalka amni daro ee ka geysta degmadaasi.
Dad Goobjoogayaal ayaa WARBAAHINTA u sheegay in Ciidamada ay baarayaan Gaadiidka iyo dadweynaha, iyadoona guudahaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada ay baaritaanada ka socdaan.
Saraakiisha ciidanka iyo Maamulka Degmada Buulo burde ayaa sheegaya in saacadaha soo aadan ay faahfaahin ka bixin doonaan arintaasi.
Shalay ayay aheyd markii qarax uu ka dhacay Bartamaha Degmada Buulo burde ee Gobalka Hiiraan.
Previous articleMareeykanka oo sheegay in uu dilay 8-dagaalame oo shabaab ah
Next articleXildhibaanada Taageersan Madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday Sedax qeeyb oo ay kala yihiin
Qasaaro kala Duwan oo ka dhashay Iskahor-imaad ka dhacay Muqdisho
Kenya uu dhaqan-gelisay Go’aankii Wajeer (Wajeer)